यो सातादेखि कुनकुन राशिहरूकाे खु’ल्दैछ भा’ग्य ? हेर्नुहो’स् कार्तिक १४ गते आईतबारदेखि २० गतेसम्मको राशिफल : – Sadhaiko Khabar
यो सातादेखि कुनकुन राशिहरूकाे खु’ल्दैछ भा’ग्य ? हेर्नुहो’स् कार्तिक १४ गते आईतबारदेखि २० गतेसम्मको राशिफल :
प्रकाशित मिति: आइतबार, कार्तिक १४, २०७८ समय: ५:४३:४४
मेष– समग्रमा मेष राशिका लागि यो साता मिश्रित रहेको छ । स्वास्थ्य क’मजोर हुने एवं नसो’चेको क्षेत्रमा धन खर्च हुन सक्नेछ । बुधबार देखि भाग्यमा सुधार हुनेछ । धार्मीक एवं सामाजिक कार्यमा तपाईको रुचि बढ्नेछ । विवाहित व्यक्तिलाई ससुराली प’क्ष बाट सहयोग प्राप्त हुनेछ । तपाईको परिश्रम को उचित मुल्य प्राप्त हुनेछ । व्यापार व्यावसायमा सफलता मिल्नेछ । धन आर्जन हुनेछ । श’त्रु परा’जित हुनेछन् भने स्वास्थ्य अवस्था पनि सकारात्मक रहनेछ । परिवारमा सामान्य वि’वादहरु देखिन सक्नेछन तर सरकारी क्षेत्र सँग सम्बन्धित काम मा भने तपाई लाई ग्रहले साथ दिनेछ । विद्यार्थी वर्गका लागि पनि यो साता उत्तम रहेको छ । तुलनात्मक रुपमा आईतबार र सोमबार भने कम’जोर दिन हरु रहेका छन् । यो साता ग्रहको शुभ प्रभावका लागि भगवान श्री गणेशको पुजा आराधना गर्नु उत्तम हुनेछ ।
बृष – तपाईका लागि साताको शुरुवात का दिन मा साझेदारी का कार्य बाट उचित मुनाफा आर्जन हुनेछ । तपाईको सामाजिक दायरा फराकिलो बन्दै जानेछ । भोग विलासका लाखि खर्च बढ्नेछ । मंगलबार र बुधबार वाद वि’वाद मा पर्न सकिनेछ । आफ्नो बोली र व्यावहारमा संय’मता अपनाउनु होला । अन्य दिनहरु भने शुभ रहेका छन । धन लाभ हुनेछ ।सरकारी क्षेत्रबाट साथ र सहयोग मिल्न सक्नेछ । आफ्ना साथीभाई बाट साथ र सहयोग प्राप्त हुनेछ । आम्दानी बढनेछ । परिवार मा मेल मिलाप हुनेछ । सन्तान बाट सुख प्राप्त हुनेछ । प्रेम पनि यो साता सुमधुर रहनेछ । विद्यार्थीका लागि हेर्दा सकारात्मक समय रहनेछ । यो साता ग्रहको शुभ प्रभावका लागि देवीको पुजा आराधना गर्नू शुभ हुनेछ ।
मिथुन – समग्रमा तपाईका लागि यो साता मिश्रित रहेको छ । तपाईका विरो’धिहरु पछि पर्नेछन । तपाईको कार्य क्ष’मता घ’ट्न सक्नेछ । कुनै पनि कार्यमा एकाग्रताका साथ लगनशिल भएर कार्य गर्न कठिन हुने देखिन्छ । तर मंगलबार, बुधबार र बिहिबार भने तपाईका लागि सबल रहेका छन् । समाजका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरु सँग चिनजान हुने अवसर जुट्नेछ। नोकरी एवं व्यापार व्यावसायमा सफलता मिल्ने देखिन्छ । साझेदारीका कार्यबाट समेत उचित मुनाफा आर्जन हुनेछ । सामाजिक कार्यमा सरिक भइनेछ । आध्यात्मिक कार्यबाट मन प्रशन्न रहनेछ । सन्तानबाट सुख प्राप्त हुनेछ अध्ययन अध्यापन कार्य सफल रहनेछ । प्रेम तथा पारिवारिक जिवन सुमधुर रहनेछ । यो साता कुटुम्ब प’क्षबाट समेत साथ र सहयोग प्राप्त हुन सक्नेछ ।**** भि’डि’यो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला👇👇👇👇****
कर्कट – समग्रमा तपाईका लागि यो साता सबल रहनेछ । सन्तान बाट सुख प्राप्त हुनेछ । कलात्मक एवं सिर्जनात्मक कार्यमा तपाईको मन जानेछ । उच्च स्तरकमा बौद्धिक व्यक्तित्वहरु सँग सहकार्य गर्न अवसर जुट्नेछ । सामाजिक ईज्जत र प्रतिष्ठा बढ्नेछ । आमाको स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ । व्यापार व्यावसाय बाट आर्थीक अवस्था मिश्रित रहने देखिन्छ । मनमा जाँगर र उत्साह कायम रहनेछ । प्रेम तथा पारिवारिक जिवनमा सामान्य स’मस्या हरु देखिन सक्नेछन् । जिवनसाथी बाट भने सुखदुखमा राम्रो साथ र सहयोग प्राप्त हुनेछ। विद्यार्थीको पढाईमा विभिन्न कारण बस उतारच’ढावहरु आउन सक्नेछन । आफ्नो पढाईमा स’चेत हुनु आवश्यक छ ।
सिंह – आईतबार र सोमबार घरपरिवारका कारण केहि चि’न्ता बढनेछ । आफ्नो बोलीका कारण परिवारका सदस्य सँगको दुरी बढ्न सक्नेछ । स’चेत रहनुहोला । तर मंगलबार देखि भने अवस्थामा सुधार हुनेछ । तपाईको रचनात्मक विचार एवं सिर्जनशिलताको प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरु बाट सराहना हुनेछ । धार्मीक एवं सामाजिक कार्यबाट ईज्जत र प्रतिष्ठामा वृद्धि हुनेछ । नोकरी गर्नेहरुका लागि पनि शुभ समय रहनेछ । प्रेम तथा पारिवारिक जिवन सुमधुर रहनेछ। विशेष क्षणहरु मा प्रेमीको साथ रहनेछ । विद्यार्थीको पढाई मन जानेछ । तपाईको परिश्रम अनुसार नै अंक प्राप्त हुने योग छ । आईतबार र सोमबार तपाईका लागि कमजोर दिनहरु भएकाले कुनैपनि महत्वपूर्ण कार्यको शुरुवात यि दिनहरुमा नग’र्न नै उत्तम हुनेछ ।
कन्या – यो साता तपाईको सा’हस तथा परा’क्रम बढ्नुका साथै हरेक कार्यमा आत्मविश्वास उच्च रहनेछ । आफ्ना दाजुभाई तथा दिदी बहिनी सँग थप प्रगाढ बन्न सक्नेछ । उनिहरुलाई आवश्यक परेको बेला आर्थीक सहयोग समेत गर्न सक्नुहुनेछ । आर्थीक अवस्था मिश्रित रहनेछ । व्यापार व्यवासाय मा उतार’च’ढावहरु देखिन सक्नेछन् । तर मंगलबार र बुधबार भने घरपरिवारका कारण चि’न्ता बढ्न सक्नेछ । विशेष गरि माता पिताको स्वास्थ्यमा स’मस्या आउन सक्नेछ । तर पनि जिवन साथीको साथ र सहयोग ले आत्मविश्वास भने कायम नै रहनेछ । नोकरी गर्ने हरुका लागि शुभ समय छ । कार्यस्थलमा तपाईको बलियो प्रभाव रहनेछ । यो साता प्रेममा मिश्रित रहनेछ । नयाँ व्यक्ति सँग प्रेम स्थापित हुन सक्नेछ । विद्यार्थीको पढाईमा पनि मध्यम अवस्था रहनेछ ।**** भि’डि’यो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला👇👇👇👇****
तुला – यो साता धन स्थानमा चन्द्रमाको गोचर का कारण व्यापार व्यावसाय बाट मुनाफा आर्जन हुनेछ । तपाईको बोलीको प्रभाव बढ्नुका साथै सञ्चार सीपमा थप निखार आउने देखिन्छ । आफ्ना दाजुभाई तथा दिदी बहिनी सँग सुमधुर रहनेछ । धार्मीक एवं सामाजिक कार्यमा रुचि बढ्नेछ । नोकरी गर्ने हरुका लागि कार्य स्थलमा कामको बोझ थपिन सक्नेछ । राम्रो परिश्रम गरि काम सम्पन्न गरेपनि अप जश हरु आईलाग्न सक्नेछ । प्रेम सकारात्मक रहनेछ । बिद्यार्थी वर्गका लागि पनि यो साता शुभ रहेको छ । अध्ययनमा मन लाग्ने र पढेको कुरा याद हुने समय रहनेछ । साताको उत्तरार्ध का दिनहरु भने कम’जोर रहेका छन ।
बृश्चिक – शिरमा चन्द्रमाको प्रभावले तपाईको ईज्जत र प्रतिष्ठा बढ्नेछ । यो तपाईको आत्मसम्मान उच्च रहनेछ तर कतिपय कार्यमा हतार मा निर्णय हुनसक्छ र पछि समस्या आउन सक्छ । परिवारमा उचित सल्लाह एवं छलफल गरि निर्णय गर्नु उत्तम हुनेछ । आर्थीक अवस्था सामान्य रहनेछ । व्यापार व्यापसाय बाट पनि मिश्रीत लाभ मिल्नेछ । विशेष गरि सञ्चार तथा प्रविधि क्षेत्रको कारोबार बाट बढि लाभ हुनेछ । धन बचत हुनेछ। नोकरी गर्ने हरुका लागि पनि शुभ समय रहने देखिन्छ । कार्यस्थलमा तपाईको कार्यको सराहना हुनेछ । बिद्यार्थीको पढाईका लागि उत्तम साता रहेको छ । प्रेम तथा पारिवारिक जिवन पनि सुखद रहनेछ । विशेष गरि आफ्नो जिवनसाथी बाट भरपुर साथ र सहयोग हुनेछ ।
धनु – साताको शुरुका दिन आईतबार र सोमबार वि’ना अर्थका दौ’डधुप हुन सक्नेछन । खर्च बढ्नेछ भने मा’नसिक चि’न्ताका कारण राति नि न्द्रा नला’ग्ने सम’स्या देखिन सक्नेछ । काम वि’ग्रनाले नै रा श्य ता बढ्नेछ । तर मंगलबार देखि अवस्थामा सुधार आउनेछ । सिर्जनात्मक एवं ता’र्कीक क्ष’मता बढ्नेछ । अ’प्ठ्यारो परिस्थिती सँग जु’ध्न सक्नुहुनेछ । सन्तान बाट सुख प्राप्त हुनेछ । प्रशस्त धन आर्जन हुने एवं बचत पनि हुने योग छ । मिष्ठान्न भोजन प्राप्त हुनेछ । साथीभाई सँग रमाईला पल हरु व्यतित हुनेछन् । सहकर्मी साथी बाट साथ र सहयोग प्राप्त हुनेछ । समाजका महत्वपूर्ण व्यक्तिहरु सँग परिचित हुने अवसर जुट्ने छ । यो साता परिवारका सदस्य विच एकआपसमा वि’वाद देखिन सक्नेछ । आर्थीक विषयमा सल्लाह नमिल्न सक्नछ । तपाईको परिश्रम अनुसार नै सफलता मिल्ने योग छ ।**** भि’डि’यो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला👇👇👇👇****
मकर – आईतबार र सोमबार व्यापार व्यावसाय का दृष्टिबाट सकारात्मक रहने देखिन्छ । सन्तान बाट काम मा सहयोग प्राप्त हुनेछ । पारिवारिक अवस्था सुमधुर रहनेछ । तपाईको कलात्मक एवं सिर्जनात्मक क्षमता उच्च रहने देखिन्छ । आफ्ना साथिभाई बाट महत्वपुर्ण साथ र सहयोग प्राप्त हुनेछ । बिरो’धीहरु परा’जित हुनेछन् । नोकरी गर्ने हरुका लागि पनि सकारात्मक रहनेछ । नोकरी गर्ने हरुका लागि नयाँ काम सिक्न पाईने अवसर हुनेछ । प्रेम सुखद रहनेछ । आफ्नो प्रेमीको हरेक सुख दु’खमा साथ र सहयोग प्राप्त हुनेछ । बिद्यार्थीको पढाईमा विभिन्न बा’धा एवं स’मस्याहरु देखिन स’क्नेछन् । चुनौ’तिहरु लाई पा’र लगाउँदै पढाईमा मन लगाउनु जरुरी छ ।
कुम्भ – नयाँ क्षेत्रका कार्य गरि नयाँ अनुभव हाँसिल गर्ने अवसर आउन सक्नेछ । व्यापार व्यावसाय बाट पनि सफल साता रहनेछ । पारिवार मा सकारात्मक वाताववरण हुनेछ । सन्तान बाट सुख प्राप्त हुनेछ । माता पिताको स्वास्थ्य अवस्था पनि सबल रहनेछ । आफ्ना भाई बहिनी सँग प्रगाढ हुनेछ । उनिहरुबाट अप्ठ्यारो परिस्थितीमा साथ र सहयोग समेत प्राप्त हुनेछ । सामाजिक एवं राजनितीक क्षेत्रमा समेत तपाईको उचाई बढ्नेछ। तपाईका बिरो’धि हरुको मनोबल क’मजोर हने देखिन्छ । विद्यार्थीको पढाईमा मन जानेछ । प्रेम सुमधुर रहनेछ । आफ्नो सुखदुखमा प्रेमीको साथ र सहयोग प्राप्त हुनेछ । साताका अ’न्त्य तिरका दिनहरु शुक्रबार र शनिबार भने अनावश्यक धन खर्च हुने एवं चिन्ता बढ्ने योग छ ।
मीन – मिन राशिका लागि यो साता उत्तम रहनेछ । यो साता तपाईको व्यस्तता बढ्नेछ । परिश्रम अनुसार सफलता हात लाग्दा मन प्रफुल्ल बन्नेछ । प्रशस्त धन आर्जन हुनेछ । व्यापार व्यावसाय बाट उचित मुनामा आर्जन हुनेछ । नोकरी गर्नेहरुका लागि सफल साता रहनेछ । कामको जिम्मेवारी बढ्न सक्नेछ । तपाईको सुझावलाई माथिल्लो निकायले महत्व दिनेछ । पारिवारिक जिवन सुमधुर रहनेछ । दाजु भाई दिदी बहिनी का साथै कु’टुम्ब प’क्षबाट समेत साथ र सहयोग प्राप्त हुनेछ । परिवारका साथ विभिन्न रमाइला कार्यक्रमा मा सरिक हुने अवसर जुट्नेछ । सुख दुखमा जिवनसाथी को साथ र सहयोग प्राप्त हुनेछ । बिद्यार्थीको पढाईमा प्र’ति’कुल समय देखिन्छ । मन चञ्चल भएर पढाईमा ध्यान केन्द्रित नहुन सक्छ ।**** भि’डि’यो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला👇👇👇👇****